I-Bullypit: Ngabe i-American Bulldog Pitbull ihlanganisa uhlobo lwakho lwenja? - Izinhlobo
Uma ufuna uhlobo olungaba inja yokuqapha emnandi, kungani ungabi nenhlanganisela yezimbili? Umxube we-American Bulldog Pitbull, owaziwa nangokuthi i- I-Bullypit , kungahle kube yi-canine oyifunayo.
Lokhu kuqhekeka kungahle kubonakale kusabisa, kepha kuzokukhathaza, noma ngabe uyisilwane sasekhaya noma ngenkathi benza njengenja egadayo noma njengenja yokubuka.
Ufuna imininingwane eminingi ngeBullypit?
Umxube onolaka nosabisayo waseMelika weBulldog Pitbull
Ubushushu: Uyini umxube wePitbull Bulldog?
Ukunakekela ukuhlanganiswa kwe-American Bulldog Pitbull
Ngabe amaBullypits aphilile?
Ngingayitholaphi imidlwane yeBullypit ethengiswayo?
Ingabe kufanele uthole ukuhlanganiswa kwe-American Bulldog Pitbull?
Izinja zomklami sekunesikhathi zikhona, kepha abanye bathi ingxube ye-American Bulldog Pitbull mhlawumbe yaqala ukuvela eminyakeni engama-30 edlule.
Ngakho-ke, ukusisiza ukuthi siqonde kancane ngalolu hlobo oluxubekile futhi sazi ukuthi yini esingayilindela ngokubukeka kwabo nobuntu babo, kuyadingeka ukuthi ubhekisise ngamunye wabazali abangenacala.
I-American Bulldog evikelayo
Ngeshwa, izinhlobo eziningi ezihlukumezayo zinomlando onzima, ofanayo kufayela le- I-American Bulldog . Lamadlozi amabi ase-canines angamaNgisi azalwa ngamabhere nezinkunzi kwaze kwaba cishe ngo-1835 lapho lo mkhuba owesabekayo wavalwa umthetho.
Kodwa-ke, babesazobhujiswa njengoba ukuvinjelwa kwakusho ukuthi ukugxila kuphendukela ekuzaleni lezi zinja ukuze zilwe nezinja.
Ngenxa yokuzalwa njengezinja ezilwayo, lezi zinja zazikhona ukhuthazwe ukuba nolaka , kanye nesimo sabo sesibindi senza iBulldog yawenza kahle umsebenzi owawufuna labo bantu.
Kamuva lezi zinja zilethwa eMelika ngabokufika, futhi ngenxa yokwethembeka kwabo, isimo sabo sokuqina, babebekelwe ukusebenza izindawo zokuqapha nemidlalo yokuzingela emapulazini. EMpini Yezwe II, uhlobo lwe-American Bulldog lwacishe lwaphela.
I-Stocky nemisipha , I-American Bulldog inamakhono amahle kakhulu kwezemidlalo futhi yaziwa ngokugxuma ngamamitha ayisithupha noma ngaphezulu emoyeni. Imile ngamasentimitha angama-50 kuye kwangama-28 (50 kuye ku-70cm) ubude futhi inesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-60 kuye kwayi-120 (27 kuye kuma-54 kg).
Bangu izinhlobo eziningi Ye-American Bulldog, kufaka phakathi uhlobo lukaJohnson (obizwa nangokuthi Isiqhwaga noma Okwakudala ), amakhulu, amakhulu, futhi anemisipha ngesifuba esibanzi.
Kukhona nohlobo lweScott (olubizwa nangokuthi i- Okujwayelekile noma Ukusebenza ), enokwakha okude, okubushelelezi, nokusubatha. Ungathola futhi ama-hybridi ezinhlobo ezimbili ezihlukile ze-American Bulldog.
I-American Pitbull Terrier
Ngokudabukisayo, i- I-American Pitbull Terrier inomlando ofana kakhulu nalowo we-American Bulldog. Lolu hlobo lwalusetshenziselwa ukubheja kwenkunzi nebhere futhi kamuva ekulweni izinja.
Ngenxa yalokhu, lo msulwa uzuze idumela lokuba yingozi, futhi kunjalo engekho emthethweni ukuba neyakho kwezinye izindawo, hhayi e-U.S kuphela, kepha emhlabeni jikelele.
I-American Pitbull ivame ukudideka ne- I-American Staffordshire Terrier . I-American Kennel Club (AKC) yanikeza inja leli gama ngeminyaka yo-1930 ngomzamo wokuzama ukuhlukanisa lo mhlanga nomlando wawo wokulwa nomgodi.
Ngenxa yalokhu, le Pittie ayaziwa yi-AKC njengohlobo lwayo uqobo. Kodwa-ke, iningi labantu liyavuma ukuthi laba ababili bahlukile kuneStaffordshire Terrier encanyana.
Lezi izinja ezinamandla ame cishe amasentimitha angu-17 kuye kwangama-19 (43 kuye kuma-48 cm) ehlombe futhi abe nesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-30 kuye kwangama-85 (14 kuye kuma-38 kg). Banenhloko ebanzi, eyisicaba enezindlebe ezincane, umhlathi obanzi, onamandla, nomsila omfushane, okhomba.
Ijazi labo elifushane, elibushelelezi liyahlukahluka ngombala kepha ngokujwayelekile liza ngezinhlobo ezimbili, okungukuthi I-Blue Nose Pitbull kanye ne- Ikhala Elibomvu Pitbull .
Njengoba igama liphakamisa, okuhlukile okunezimpunga eziluhlaza okwesibhakabhaka kunekhala nejazi elinombala ompunga noma wamalahle, kanti iPitbull enekhala elibomvu inekhala elibomvana elinoboya obumbala wethusi.
Yize iBully Pit ibonakala ibethusa abanye, umlomo wayo ohlekisayo ngokubukeka kwayo okumomothekayo kungenza kubonakale sengathi inja yakho ikumomotheka.
Inhlanganisela yeBulldog Pitbull ngokuvamile inayo umzimba oqinile ngesifuba esibanzi, umqolo oqinile, izinyawo ezinkulu, nemilenze yemisipha.
Banekhanda elibanzi nelisicaba elinomlomo omfushane, nezindlebe ze-floppy noma ze-rosebud. Imisila yawo ingaba mide futhi mincane.
Ukukunikeza umbono ongcono wokuthi ingxube ye-American Bulldog Pitbull ibukeka kanjani, buka le vidiyo:
Umxube we-American Bulldog Pitbull uzoba mkhulu kangakanani?
Ukuwela i-American Bulldog nge-American Pitbull Terrier kuzoholela ku- emaphakathi kuya kusayizi omkhulu inja emi ngobude obuphakathi Amasentimitha angama-20 kuya kwangu-24 (50 kuya ku-60 cm) futhi isisindo phakathi Amakhilogremu angama-40 nangu-80 (18 no-36 kg).
Ngenxa yobukhulu bayo obukhulu, iPitbullBulldog AYIKUFANELEKILE impilo yasemafulethini futhi ingakulungela kangcono ukuphila epulazini noma, okungenani, ikhaya elinamagceke amakhulu abiyelwe lapho inja ingazulazula khona.
Ijazi lenhlanganisela yase-American Bulldog Pitbull
Yize ijazi lenhlanganisela yaseMelika iBulldog Pitbull imfishane, ilungile, futhi ilula, lolu hlobo luhlobo hhayi i-hypoallergenic futhi ngaleyo ndlela ngeke ilungele kahle abantu abanezinto ezingezwani nokwaliwa.
Uhlobo lwePitbull, kungaba olukhala oluhlaza okwesibhakabhaka noma olunekhala elibomvu, luzothinta ukubukeka nombala womdlwane weBullypit.
Ngokususelwa kubazali bayo, umdlwane wokuxuba waseMelika iBulldog Pitbull ungangena ngemibala ehlukahlukene njengombala omnyama, onsundu, obomvu, ophuzi, ompunga, osagolide, okhilimu nomhlophe.
umthombo : I-American Bulldog Red Nose Pitbull mix
I-American Bulldog Pitbull iyi- ukuvikela ngokweqile inja kepha izobonisa a ubuntu obujabulisayo uma uhlangana futhi uqeqeshwe lapho useyidlwane.
Ukuqeqesha umdlwane weBullypit kungaqala kusenesikhathi amasonto ayisishiyagalombili ubudala . Ukwenza kanjalo kuzokwenza le fido ithuthukise isimilo esihle.
Zilungiselele izikhathi zokuqeqesha ezikhohlisayo noma eziyinselele. Ngenxa yezici zabo ezivelele, ezingenasineke, bazodinga isandla esiqinile nomnikazi ozibophezele.
Kuhle ukuthi ube nolwazi oluthile lapho usebenzelana nalolu hlobo ngoba uma kungokokuqala ukuba nenja, iBullypit ingakuqaphela.
Ungakhohlwa ukuthi ukuqiniswa okuhle kubalulekile lapho ufundisa noma iyiphi inja, noma ngabe i-purebred noma i-crossbreed.
Izingxube ze-American Bulldog Pitbull nazo zingaxwayiswa nabantu ongabazi nezinye izinja. Ngalokho kusho, kungenzeka ukuthi banakho ukuthambekela ekubhekaneni nolaka , ikakhulukazi ngezilwane ezifuywayo ezincane. Umlando wabazali be-canine nawo ungadlala indima kulokhu.
Njengazo zonke inhle yokubuka , AmaBullypits athanda ukukhonkotha futhi azowulungela umsebenzi. Uma ufundiswe futhi uphathwa ngendlela efanele, ungalindela umngane onoboya obumnandi ngokwedlulele kulolu hlobo. Futhi bayizinja ezihlakaniphe kakhulu ezithanda ukunakwa nokuzijabulisa.
Ungahlola ukuthi ihlakaniphe kangakanani i-American Pitbull kule vidiyo, lapho umuntu eqeqeshwa khona ukuhlala, ukushiya, nokulanda:
Izinto ezimbalwa okufanele zikhunjulwe uma kukhulunywa ngokuba nalolu hlobo - ngenxa yejazi lazo elincanyana, lokhu kuhlangana akuhambi kahle ezimweni ezifudumele kakhulu noma ezibandayo.
Isendlalelo sabo esisodwa soboya asinikezi ukuvikelwa okuningi futhi kusho nokuthi iBulldog Pitbull isengozini yokushiswa yilanga futhi idinga ukusebenzisa i-sunscreen!
Ingabe le fido idinga ukuzivocavoca okungakanani?
Le hybrid isebenza kahle, futhi okungenani imizuzu engu-90 yokuzivocavoca nsuku zonke . Ukuba sendleleni kuzosiza le doggo ukuthi ihlale iziphethe kahle futhi ijabule.
Yingakho sibancoma emindenini ekhuthele ethokozela ukuchitha isikhathi ngaphandle futhi bathathe umngani wabo we-canine kuma-run, ama-jogs, naku-hiking.
Ngokuvuselela ingqondo, ukuzingela amagugu, noma ukufihla nokufuna ithoyizi labo abalithandayo noma ukwelashwa kungumsebenzi omuhle.
Vakashela kuphela ipaki yezinja uma iBullypit yakho iqeqeshiwe futhi inenhlalo. Kufanele uqaphele lapho uvumela i-pooch yakho idlale nezinye izinja, ngakho-ke ungamshiyi engagadiwe .
Ukondla i-American Pitbull yakho
Ama-Bullypits kufanele ondliwe okungenani 2 ½ 4 izinkomishi kokudla kwezinja usuku ngalunye, kuhlukaniswe kwaba ukudla okuthathu kuya kokune. Kuzosiza ukuvimbela isisu esiswini, okuyisimo esivamile kodwa esibi ezinhlotsheni ezinkulu.
Lokhu kuhlakazeka kuzozuza kakhulu ekudleni kwezinja ezisezingeni eliphakeme okunokuqukethwe okusanhlamvu okuphansi njengoba okusanhlamvu kungadala ukungezwani komzimba. Kufanele futhi ibe nenyama ephezulu ne-Omega 3 fatty acids ukukhulisa amathambo aqinile nokuqinisa isisindo somzimba.
Ukudla okunothile chondroitin noma i-glucosamine kuyisinqumo esihle sokugcina amathambo esilwane sakho enempilo futhi uvikele noma yisiphi isifo esihlangana ngokuhlangana.
Uma unesikhathi nesabelomali sokondla i-canine pal yakho ukudla okuluhlaza, lokho kungaba kuhle futhi! NjengoBenzo ngalesi sidlo esinomsoco.
Vele uqiniseke ukuthi ukudla onikeza inja yakho kusekelwe eminyakeni yakhe, ubukhulu, izinga lomsebenzi, kanye nempilo.
Ukuzilungisa okunomoya opholile
Izidingo zokuzilungisa zomxube we-American Bulldog Pitbull yilezi phansi kuya kokulingene . Ukuxubha kudingeka kuphela kabili ngesonto - ngaphandle kwezikhathi zokuchithwa okuphezulu lapho kudingeka khona ukuxubha nsuku zonke.
Mgeze kuphela lapho kunesidingo, njengalapho eba ongcolile noma onukayo. Ukusula inhlanganisela yeBulldog Pitbull ngendwangu yokuwasha emanzi kuzokwanela ukumhlanza nokususa noma yiziphi izinwele ezivulekile.
Amazinyo ayo kufanele ahanjiswe kabili noma kathathu ngesonto, kuyilapho izinzipho kufanele zinqunywe lapho zinde kakhulu noma uziqaphele zihlangana phansi. Izindlebe zingabuye zihlolwe futhi zisulwe zihlanzeke masonto onke.
Uhlobo oluqinile oluxubekile lwe-American Bulldog ne-Pitbull luphumela esiphambanweni esingaba nempilo ejwayelekile ye Iminyaka engu-10 kuya kwengu-13 . Noma kunjalo, ama-hybridi angazuza njengelinye lezinkinga zezempilo abazali babo abahlanzekile abajwayelene nazo.
Umlingani waseNgilandi we-American Bulldog waziwa ngezifo eziningana ezifana ne-hip dysplasia, ejwayelekile ezinjeni ezinemilenze emifushane.
Gxila ekugcineni umbuso wokuzivocavoca nokudla okungeziwe okuzosiza ukuvimbela lokhu kwi-Bullypit yakho.
Ngenxa yekhala labo elifushane, umdlwane wakho nawo ungakhula I-Brachycephaly Airway Obstructive Syndrome , okungadala izinkinga ezinkulu zokuphefumula.
Ingubo eyodwa yesendlalelo somzali wePitbull nayo yenza lolu hlobo lube sengozini yokungezwani nezinto ezithile.
Ezinye izifo ezivamile ezingathinta ukuxubana kwe-American Bulldog Pitbull yilezi i-hypothyroidism , isifo senhliziyo, izinkinga zamehlo, nokuhlehlisa ukuthimula.
Ngenxa yobuchwepheshe, ungathola ama-pups atholakalayo online! Uma ucabanga ngokuthola i-American Bulldog Pitbull mix puppy, ungalindela ukuthi zibize phakathi $ 250 no- $ 2,000 .
Intengo yeBullypit izoncika ezintweni ezifana nendawo yomfuyi, ukuthandwa kwesibaya, igazi labazali, nokutholakala kwemidlwane.
Kuzodingeka futhi ukuthi ubheke ne izindleko ezijwayelekile zonyaka , kanye nezikweletu ezijwayelekile zokwelashwa. Izindleko zokwelashwa zaminyaka yonke zingahle zisuke ku- $ 485 ziye ku- $ 600. Ngemuva kwalokho ezinye izindleko zizoba phakathi kuka- $ 510 no- $ 650 unyaka ngamunye.
Abahlanganisi be-American Bulldog Pitbull mix
Lapho ufuna i-Bullypit puppy yakho ephelele, ukucabanga okuningi nokunakekelwa kufanele kungene ekuzameni ukuthola umfuyi omuhle.
Ukuzalela ngokunganaki kwe-American Pitbull ne-American Bulldog kungaholela enjeni enolaka.
Zama ukugwema ukuthenga le ngxubevange esitolo sezilwane noma ezindaweni lapho ungenasiqiniseko sokuthi kulandelwe imikhuba yokuziphatha efanelekile.
Ukuze uqale usesho lwakho nge-American Bulldog Pitbull mix puppy, funa abalimi abasebenza ngokukhethekile kumxube we-Pitbull noma i-Bulldog, njenge I-Hustle Line Kennels eMemphis, TN.
Ungahlola futhi ama-akhawunti wezokuxhumana, kanjena Ikhasi le-Facebook , lapho ungathola khona imidlwane yokuxuba yaseMelika yeBulldog Pitbull. Kukhona nezindawo zemakethe ezinikeza amamiksi wePitbull nezinhlanganisela zaseMelika Bully.
Ngenxa yemvelo yalolu hlobo, uvame ukuthola ukuxubana kwe-American Bulldog Pitbull ezindaweni zokukhosela ongazisebenzisa noma uzakhe kabusha.
Ngokuya ngokwedlule, ukutakulwa kwalokhu kwehliswa kungadinga isikhathi esiningi nokuzinikela maqondana nokuqeqeshwa, ukuhlalisana kabusha, nokuzivocavoca umzimba. Ezinye izinhlangano zokutakula zenza izinja eziqeqesha ezihlala nazo, ngakho-ke lokhu ungabuza indawo yokukhosela.
Nazi ezinye izindawo lapho ungaqala khona usesho lwakho lweBulldog Pitbull yokutholwa:
Ukutakulwa kukaShaw Pitbull (UColumbus, MS)
I-Bad Rap (Oakland, CA)
Ukuhlengwa KweBully Breed Rescue (IKansas City, MO)
Ukutakulwa Kwabahlukumezi beFresno (ESanger, CA)
IBulldog Club yaseMelika ine inethiwekhi yokutakula lapho behlinzeka ngohlu lwezinhlangano nezinja ezingamukelwa umbuso ngamunye.
Lolu hlobo, kuyilapho kungesona isilwane esifanele wonke umuntu, kukhombisa ukwethembeka okuqinile kubantu obathandayo.
Isimo esivikelayo, esinamandla, nesinamandla seBullypit sibenza balungele kangcono abanikazi bezinja abakhuthele nabanolwazi abazimisele ukutshala isikhathi sokuqeqesha, ukuzivocavoca nokuzijabulisa nenja yabo.
Uma ungumnikazi we-novice, ungathola lolu hlobo oluxubekile lube nenkani ngokweqile, lunolaka, futhi kunzima ukululawula.
Ungathini ngale nja yomklami? Ingabe unayo inhlanganisela yase-American Bulldog Pitbull? Yabelana ngendaba yakho nathi ngokuphawula ngezansi!
Amagama Enja ye-Badass: Imibono Engu-70 Ephelele Yezinswelaboya, Izilwane Ezifuywayo Ezingavunyelwe
Ingabe i-German Shepherd Golden Retriever Mix ikulungele?
king charles and bichon mix
labrador kanye pitbull mix imidlwane
umalusi wase-australia / i-blue heeler mix
i-aussie border collie lab mix